ओमकार टाइम्स रोनाल्डाेले युभेन्टस छाड्न लागेकै हुन् त ? – OMKARTIMES
रोनाल्डाेले युभेन्टस छाड्न लागेकै हुन् त ?
एजेन्सी । युभेन्टस युराेपियन च्याम्पिन्स लिगको क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डोबारे इटलियन सञ्चारमाध्यममा ठूलो बहस चलेको छ ।
लिगबाट बाहिरिएपछि पोर्चुगिज सुपरस्टार रोनाल्डोलाई सबै भन्दा बढि दबाब परेको छ । युभेन्टस च्याम्पिन्सकै लागि युभेन्टसले रियल मड्रिडबाट रोनल्डोलाई ९९ मिलियन पाउण्डमा तिरेर लगेको थियो । तर लिगको क्वटरफाइनलबाटै युभेन्टस बाहिरिएपछि रोनाल्डो दबाबमा परेका हुन् ।
अहिले रोनाल्डोले क्लबलाई सेमिफाइनलसम्म पनि पुर्‍याउन नसकेको भन्दै धेरै आलोचना पनि भइरहेको छ । केही इटालियन सञ्चारमाध्यमले रोनाल्डोले चाँडै क्लब छोड्ने समेत बताएको छ ।
इटालियन सञ्चारमाध्यमहरुले रोनाल्डो अर्को सिजन अगाडि नै क्लब छोड्ने सक्ने बताएका छन् । युभेन्टसले लिगको उपाधिको लागि नै रोनाल्डोलाई भित्र्याएको पनि जनाएको छ ।
युभेन्टसले रोनाल्डोको ठाउँमा अर्का खेलाडी खोज्ने तयारी गरेको समेत गर्न थालेको बताइएको छ । रोनाल्डो आफै पनि युभेन्टसमा बस्न इच्छुक नभएको सञ्चामाध्यमले जनाएको छ । युभेन्टससँगको रोनाल्डोको सम्झौता २०२२ सम्मका लागि रहेको छ ।
रोनाल्डोले रियल म्याड्रिटमा हुँदा म्याड्रिटलाई चार पटक युरोपियन च्याम्पियन्स जिताएका थिए । युभेन्टसबाट रोनाल्डोले यसै सिजनबाट युरोपियन च्याम्पियन्स लिग खेलेका हुन् । उनले यस प्रतियोगितामा कूल ६ गोल गरे । उनी च्याम्पियन्स लिगको इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनको नाममा कूल १२६ गोल छ ।
रोनाल्डोको टिम युभेन्टस सेमिफाइनलमा लिगको सेमिफाइनलमा डच टिम आयाक्सँग हारेको थियो । उक्त हारपछि रोनाल्डो निकै भावुक भएका थिए । रोनाल्डो ९ वर्षपछि पहिलो पटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल पुग्न असफल भएका हुन् ।